Xundubey oo soo bandhigay xogtii uu ka hayey Rooble - Caasimada Online
Home Warar Xundubey oo soo bandhigay xogtii uu ka hayey Rooble
Xundubey oo soo bandhigay xogtii uu ka hayey Rooble
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa soo bandhig xog ku saabsan arrimo uu sheegay inay dhex-mareen isaga iyo ra’iisul wasaare Rooble oo salka ku haya dhaqaale, lana xiriira dalalka Masar iyo Imaaraadka Carabta.
Xundubey ayaa xogtan kusoo qoray bartiisa facebook, oo tan iyo markii xilka laga qaaday uu ku weerarayey Rooble. Caasimada Online ma xaqiijin karto sax ahaanshaha xogta uu Xundubey faafiyey. Hoos ka aqriso.
Kadib: markii aan dareemay in dawladda Soomaaliya ay dhaqaala la’aan xoogani hayso, ayaan Rooble u tegay. Waxa aan ku iri: walaalow, dhaqaala la’aantaan kuma sii jiri karnee, aan Wadamada Carabta ee afartii sano ee la soo dhaafay aan wax dhaqaala ah oo muuqda na siin, aan albaabadooda garaacno! Carabtiina waa taas heshiisay oo arimihii Gacanka Carabtu waa iska dhamaadeene, yaanan kaligeen meel cidla ah iska fadhine!
Xogtuna waa HANTI dadweyne, oo lama qari karo!